ကျော်သူရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမှာ နန်းခင်ဇေယျာ သရုပ်ဆောင်မယ် | ဧရာဝတီ
ကျော်သူရိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားမှာ နန်းခင်ဇေယျာ သရုပ်ဆောင်မယ်
လင်းသန့်| January 16, 2013 | Hits:8,085
16 | | ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ့် နန်းခင်ဇေယျာ (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss International 2012 မှာ ထင်ရှားလာပြီး ပရိသတ်ရွေးချယ်မှုဆုနဲ့ မစ္စ အင်တာနက် ဆုတွေရခဲ့သူ အလှမယ် နန်းခင်ဇေယျာဟာ အခုဆိုရင် ပထမဆုံး အကြိမ် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတကားမှာ သရုပ်ဆောင် တော့မှာပါ။
ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ ဦးဆောင်တဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသင်း (ရန်ကုန်) မှာလည်း ပရဟိတ လုပ်ငန်းမှာ လုပ်အားပေးနေတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာကို ဦးကျော်သူက ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အတွက် အခုလို ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးဖို့ ဖြစ်လာတာပါ လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“ပထမတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဦးကျော်သူက ကျမကို ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေထဲက တကယ့် အဖြစ်အပျက် အခက်အခဲ လေးတွေအကြောင်း ရိုက်စရာ ရှိတယ်တဲ့။ သမီး သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လားလို့ မေးတော့ ကျမ သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သွားတာပါ၊ ဒါက ပထမဆုံး ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ပါ” လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးမှုတွေ လုပ်နေသလို ဧည့်လမ်းညွှန် တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာဟာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ မှာလည်း လုပ်အားပေးနေတဲ့အတွက် အခုလို ရုပ်ရှင် ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး မှုကိုတော့ လာမယ့် မတ်၊ ဧပြီ၊ မေလ လောက်မှာ စတင်နိုင်တယ်လို့ ဦးကျော်သူ ကလည်း ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
“အခု ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားက ပရဟိတ လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တာပါ။ ဇာတ်ညွှန်းတွေ ကတော့ ဘာမှ မပြီး သေးဘူး။ ဇာတ်ညွှန်းပြီးမှပဲ ရိုက်ဖြစ်မယ်။ မတ်၊ ဧပြီ၊ မေ လောက် ရိုက်ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။ သူကလည်း ကျနော်တို့ လူမှုရေး အသင်းမှာ လာပြီး လုပ်အားပေးနေတော့ သူ့ကို ကမ်းလှမ်းလိုက်တာပါ။ ဒီ့ပြင်လူတွေလည်း ပါအုံးမှာ။ ဒါ ကတော့ ကုသိုလ်ရေး လုပ်မယ့် ကားဆိုတော့ ပရဟိတ စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အနုပညာသမားတွေက ကျနော်တို့ကို ကမ်းလှမ်းလာရင် ကျနော်တို့က စီစဉ်ပေးမှာပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အခုချိန်အထိ ကြော်ငြာတွေပဲ ရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင် မရိုက်ဘူးလို့ ပြောဆိုထားခဲ့ပေမယ့် ဦးကျော်သူက ဇာတ်ညွှန်းတွေ ရေးပြီး ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးမယ် ဆိုလာတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ပြောပါတယ်။
“ကျမ သရုပ်ဆောင်ထားတာ အခုဆို ကြော်ငြာတွေက ၇ ခုလောက် ရှိပါပြီ။ ကျမက ပထမ စစတုန်းကတော့ ရုပ်ရှင် ရိုက်မယ်ဆိုတာ ငြင်းထားတယ်။ အဲဒီလို ငြင်းထားပေမယ့် ဦးကျော်သူက ဇာတ်ညွှန်းတွေလည်း စီစဉ်နေပြီဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်မယ်လို့ ဦးကျော်သူကို ပြောလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် ကာရိုက်တာ (ဇာတ်ရုပ်) တော့ မသိရသေးပါဘူး။ ဘယ်လို ဇာတ်ညွှန်းလာမလဲ ဆိုတာလည်း မသိရသေးပါဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်သူကတော့ မြန်မာလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို အခြေခံ တင်ပြသွားမယ့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ဖြစ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့က တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူလူထု ကိုယ်စား ပြည်သူလူထု တွေ့ကြုံရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ရုန်းကန် နေရတဲ့ ဟာတွေကို ပြည်သူလူထု ကိုယ်စား တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ ကိုယ်စား ရိုက်ကူးမှာပါ။ အဲဒီတော့ ဒါက အများအကျိုးပြု ဇာတ်ကားပေါ့” လို့ ဦးကျော်သူက ပြောပါတယ်။
အခုလို ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာတော့မယ့် နန်းခင်ဇေယျာဟာ အခုတော့ ဘယ်လို ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ဘယ်လို သရုပ်ဆောင်ရတယ် ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမှုတွေ လုပ်နေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။
“အခုဟာက ပထမဆုံးဆိုတော့ ရုပ်ရှင်မှာ ဘယ်လိုသရုပ်ဆောင် ရမယ်ဆိုတာကအစ အကုန်လုံး လေ့လာဖြစ် နေပါတယ်” လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆိုပါတယ်။
သူ့ဘ၀မှာ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူးလို့ နန်းခင်ဇေယျာက ပြောပေမယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲက နာမည်ကြီး မင်းသမီးကြီး ၂ ဦးကိုတော့ လေးစား အားကျပါတယ်တဲ့။
“အခုလို ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့တော့ မျှော်လင့်မထားခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ မထွန်းအိန္ဒြာဘို တို့ကို ကျမ ခရေဇီဖြစ်တယ်” လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆိုပါတယ်။
အခုလို ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်လာတော့မှာမို့လို့ ကြိုးစားပြီး သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာဟာ သူ့ဘ၀မှာ ဧည့်လမ်းညွှန်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အမြဲ ဆက်လုပ်ဖြစ်နေမှာပါလို့ ပြောပါတယ်။
“ကျမ ကြိုးစားပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပရဟိတ လုပ်ငန်းနဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန် လုပ်ငန်းကိုတော့ အမြဲ လုပ်ဖြစ်မှာပါလို့ ပရိသတ်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် ဆိုရင် ကျမ ခရီးစထွက်ပါပြီ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ အင်းလေး၊ ပုဂံ ဒေသတွေကိုပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
အချိန်တိုအတွင်း အင်တာနက် သုံးစွဲသူ မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သူက “ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆက်သွယ် လာတာ ရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်က တဆင့်လည်း လာတာရှိပါတယ်” လို့ ပြောပြပါတယ်။
တဘက်မှာလည်း နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူဟာ ရုပ်ရှင် ကင်မရာကို ပြန်လည် ကိုင်တွယ်ပြီး တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အထိ စောင့်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အစိုးရက ခွင့်ပြုချက်မပေးရင် အခု ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားအတွက် ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
“အခုလည်း ကင်မရာကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုင်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက တရားဝင် ခွင့်ပြု၊ မပြုတော့ မသိဘူး။ ဇင်ဝိုင်းကတော့ သူ ရအောင် လုပ်ပေးမယ် ပြောပါတယ်။ ခွင့်ပြုမှ ရိုက်လို့ ရမှာပေါ့” လို့ ဦးကျော်သူက ဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်သူကို နိုင်ငံတော်က ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးခွင့် ပေးမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ပြန်လည် ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူက ဒီဇာတ်ကားဟာ အားလုံးအတွက် အကျိုးပြုမယ့် ကား၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူတွေ အတွက်၊ လူမှုရေး အဖွဲ့တွေအားလုံးကို အကျိုးပြုမယ့် ကားဆိုတာ အာမခံတယ်လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
နာမည်ကျော် ကိုရီးယား အနုပညာရှင်များနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့မည်
သမ္မတ မိန့်ခွန်းကို နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝန်းက ကြိုဆို
အလံဇောက်ထိုး ကြံ့ခိုင်ရေး ညီလာခံနဲ့ နန်းခင်ဇေယျာရဲ့ အင်တာနက်မယ် ဆု
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း တချို့ တက္ကသိုလ် ပြန်တက်ခွင့်ရ
ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းမှု တည်ငြိမ်ခြင်းသည် စစ်တပ် ကျေးဇူးကြောင့်ဟု ဦးသိန်းစိန်ပြော
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Dove January 17, 2013 - 12:26 am	Every beautiful girl is not good actress. I wish she can do it well in action movie business.
Reply	hotladylay January 17, 2013 - 6:55 am	ဦးကျော်သူကြီး ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက်ကိုနစ်မြုတ်နေတဲ့ ရတနာရွှေလှေကြီးတစင်းပြန်လယ်ရှာဖွေရရှိသလိုခံစားရပါတယ်။
ကန္တအသီးကလူတွေ စာပေအနုပညာသမားတွေ ဟာဖိနှိပ်မှု ကျဉ်းကျပ်မှုတွေကြားကအသက်ရှူမွန်းကျပ်ပြီးအသက်ရှူရပ်သွားကြခဲ့တာတွေ အနုပညာကိုမိမိကပဲဆက်မလုပ်ချင်လောက်အောင် စိတ်ကုန်ခမ်းသွားကြတာတွေ အနုပညာကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတာတွေကြောင့် ပြည်သူတွေဟာအနုပညာရှင်တွေရဲ့ ရင်ထဲကရသတွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတာလေ။
ဘာပဲပြောပြော ဦးကျော်သူကြီးရဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့အနုပညာလှေကြီးပေါ်မှာအသစ်စက်စက် နန်းခင်ဇေယျာမြင့်လေးရဲ့ Talent ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအမြန်ဆုံးခံစားပါရစေရှင်။
ဦးကျော်သူကြီးရဲ့တခေတ်ပြန်နိုးထလာတဲ့ အနုပညာကို လေးစားလျှက်
Reply	Ko Khine January 26, 2013 - 10:42 pm	တိုင်းရင်းသူလေး နန်းခင်ဇေယျာ ဒီထက်မကအောင်မြင်ကျောင်းကြားပြီး နာမည်ကြီး မင်းသမီးများကျော်တက်နိုင်ပါစေ ။ ယဉ်ကျးသည့်စာရိတတ များဆက်လက်ထိမ်းသိမ်းနိုင်ပါစေ ။
Reply	နေမင်းသူ March 3, 2013 - 4:32 pm	မမနန်းခင်ဇေယျာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲဖြတ်သန်းသွားပါနော်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်စွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်ခြင်း (သို့) Gone Girl
အချစ် (သို့) ဆင်ခြင်ဉာဏ်အား အမြဲ အားပြိုင် စိန်ခေါ်နေသောအရာ
“ငဘ” သည် ရယ်စရာ မဟုတ်ပါ
တိုင်းသိပြည်သိ ဂျောက်ဂျက်နဲ့ အင်တာဗျူး
“နှုတ်ခမ်းခြင်းနမ်းရဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်မယ့်သူထဲမှာ ကျနော်မပါဘူး” ဒါရိုက်တာ ၀င်းထွန်းထွန်းနဲ့ အင်တာဗျူး
မျိုးကြီးရဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းများကို ခံစားခြင်း
အောက်ခြေက တက်လာတဲ့အတွက် ပြောစရာစကားတွေ ပိုရှိတယ် ဆိုတဲ့ တေးရေး တေးဆို ပိုပိုနဲ့ အင်တာဗျူး